Microsoft Publisher - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:Microsoft Publisher screenshot.png
၁၉၉၁; ၃၁ နှစ် အကြာက (၁၉၉၁)
Microsoft Publisher သည် မိုက်ခရိုဆော့မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် Desktop Publishing အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Microsoft Word နှင့် မတူညီသည်မှာ ၎င်းသည် text composition နှင့် proofing စသည်တို့ထက် page layout နှင့်design ကို အလေးထားသည့် ဆော့ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
Publisher တွင် Microsoft Office ၏ မြင့်မားသည့်တည်းဖြတ်မှုလုပ်ဆောင်စွမ်းများ ပါဝင်သည်။ ဤဆော့ဝဲသည် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် သေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဤဆော့ဝဲကို ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းဈေးကွက်တွင် အသုံးပြုမှုအနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ ဈေးကွက်တွင် Adobe InDesign နှင့် ယခင် QuarkXPress တို့က လွှမ်းမိုးထားသည်။
Microsoft Office ၏ အပ်အများစုသည် Microsoft Office 2007 မှစတင်ကာ သူတို့၏ အသွင်အပြင် (User Interface) တွင် ribbons များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ Publisher မှာမူ Microsoft Office 2010 မတိုင်မီအထိ Ribbon ပါဝင်မှု မရှိဘဲ Toolbar သာဝင်ခဲ့သည်။
LibreOffice သည် Publisher ၏ ဖိုင်ပုံစံဖြစ်သည် .pub ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းက အထောက်အပံ့ပေးထားသည်။ Corel Draw X4 သည်လည်း read-only အနေဖြင့် အထောက်အပံ့ ပေးထားသည်။
Publisher သည် အခြားသောဖိုင်ပုံစံများစွာကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ၎င်းတို့တွင် Enhanced Metafile (EMF) လည်း ပါဝင်သည်။ Microsoft Publisher စမ်းသပ်ဗားရှင်းတွင် .pub ဖိုင်များကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Adobe PageMaker သည်လည်း .pub ဖြင့် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်ပုံစံနှစ်ခုတို့သည် ဆက်စပ်မှု မရှိဘဲ သဟဇာတဖြစ်မှုလည်း မရှိပေ။
Microsoft Publisher 2002 10.0[မှတ်စု ၁] May 31, 2001 Professional OEM, Professional Special Edition
Microsoft Publisher 2010 14.0[မှတ်စု ၂] Jun 15, 2010 Standard, Professional, Professional Plus
↑ Starting with Publisher 2002, the version number jumps to 10.0 to tally Microsoft Office versions.
↑ Version 13 was skipped due to the superstition attached to the number 13.
↑ ၁.၀ ၁.၁ Desktop Publishing Software 2007 Style။ Computor edge (2007-07-27)။2September 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Office Publisher 07။ PC World Australia။ IDG။.
↑ User interface differences in Office 2010 vs earlier versions။ TechNet။ Microsoft။
↑ Where is the Publisher viewer?။ Microsoft။
↑ Publisher Life-cycle။ Microsoft။
↑ Paul Thurrott (2009-05-14)။ Office 2010 FAQ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Publisher&oldid=660598" မှ ရယူရန်